ဗီဒီယိုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အစီအစဉ်များ Adobe အညွှန်းကိန်း cc နှင့် CS အကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? ဥပမာအားလိုလားသူ cc7နှင့်6CS premiere
Adobe cc နှင့် cs ပရိုဂရမ်များအကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ဥပမာအားဖြင့် Premiere pro cc7နှင့် cs6CS - Creative Suite သည်ဗားရှင်းခြောက်ခုကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ Creative Cloud ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည်။
အဘယ်သူသည် BSI CMOS အားဖြင့် SMOS matrix ကိုအကြားခြားနားချက်ကိုသိ
SMOS matrix သည် BSI CMOS နှင့်မည်သို့ကွာခြားသည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ နောက်ကျောတွင် backlighting မရှိပါ။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ သာမန် CMOS အလင်းသည်ဘက်တစ်ဖက်ရှိဆဲလ်များသို့ကျရောက်သည်။
Sony က Vegas မှာစာတန်းများကိုလုပ်?
Sony Vegas မှာစာတန်းထိုးနည်း ငါကထပ်ထည့်မယ် ဤတွင် Sony Vegas Pro 8.0 အတွက် "Help" ကိုယူနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတွင် "ProType Titler" ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအတော်လေးပြည့်စုံသောဖော်ပြချက်ပါရှိသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင်ကဘာလဲ? အဘယ်မှာရှိသငျသညျကို download လုပ်ပေးနိုင်သလဲ
ဗီဒီယိုဖိုင်ကဘာလဲ။ ဘယ်မှာ download လုပ်လို့ရမလဲ? mp3real.ru ဗီဒီယိုဖိုင်များသည်ယခုခေတ်တွင်အငြင်းပွားစရာမဟုတ်ပါ၊ တစ်ခါတစ်ရံဗွီဒီယိုတွင်သူတို့ရှိနေခြင်းသည်အယ်ဒီတာတွင်အနုပညာအရသာမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကြောင့်မတွန်းလှန်ဖို့ကြိုးစားပါ ...
iFrame AJAX-transport IFrame ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း - ဤသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်စွယ်စုံနှင့်စွမ်းအားအရှိဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းတွင်ပါရှိသည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များလည်းအများဆုံးဖြစ်သည်။ မမြင်ရသော IFrame ကိုဆာဗာနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ဖန်တီးထားသည်။ လွယ်ကူစွာပြောင်းလဲနိုင်သည် ...
ဗွီဒီယိုတစ်ခုထဲသို့စာသားကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ထည့်ရမည်နည်း။ သင်၏ဗီဒီယိုကိုမည်သည့်ဗွီဒီယိုအယ်ဒီတာတွင်မဆိုထည့်သွင်းသည်၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - စာလုံး - စာသား၊ သင်လိုအပ်သည့်အရာကိုကလစ် နှိပ်၍ ရေးပါ။ စာသားများမည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည် - ...
Sony Vegas တွင်ဗွီဒီယိုတစ်ခုလှန်ပစ်ရန်ဘယ်လိုလှန်ရမလဲ။ ၁။ ဇောက်ထိုး ၂။ နောက်ပြန်နှစ် ဦး စလုံးဒီမှာ http://kanst.mediatory.ru/ တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ယခုငါ Vegas ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါ။ ငါမှတ်ဉာဏ်ထဲကနေရေးသားနေပါတယ် ...
ဒီဒိုင်ယာနာ Naykova ကားအဘယ်သူနည်း ဘယ်သူ Zaneta?
Diana Nikova ကဘယ်သူလဲ သူ့ကိုဘယ်သူယူမလဲ။ Diana Naikova သည်လူကြိုက်များသောရုရှားဗီဒီယိုဘလော့ဂါတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလက်ပံတောင်းများကိုရိုက်ကူးခြင်းဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။
ဘယ်လိုကဗီဒီယို reverse ပါသလဲအဆိုပါ forehand အပေါ်မြည်းသည်
သင်အလုပ်လုပ်နေသောတည်းဖြတ်သူကိုမညွှန်ပြပါကဗွီဒီယိုတစ်ခုအားမည်သို့ပြန်ပြောင်းရမည်နည်း။ ရှေ့သို့မသွားမီ၊ မည်သို့ရှင်းပြနိုင်မည်နည်း။ Sony Vegas မှာ။ ဗွီဒီယိုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ညာဖက် နှိပ်၍ ထည့်ပါ ...
program ကို Adobe ကပရီမီယံ Pro မှာ AVI format နဲ့ဗီဒီယိုကယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဗီဒီယိုတစ်ခုကို Adobe Premium Pro တွင် avi အဖြစ်မည်သို့သိမ်းဆည်းရမည်နည်း။ ငါလိမ်မှသာလျှင် (ကျွန်ုပ်သည် Premiere တွင်ကြာမြင့်စွာအလုပ်မလုပ်ခဲ့ပါ) File - Export နှင့်၎င်းသည်မည်သည့်အစီအစဉ်ဖြစ်သည်ကို ???? ပထမဆုံးအကြိမ်…
အသံကဗီဒီယို AVI တိုးမြှင့်ဖို့ကိုဘယ်လိုခွဲခြားမလဲ ဖုန်းမှတ်တမ်းတင်အလွန်တိတ်ဆိတ်ခဲ့
AVI ဗီဒီယိုဖိုင်၏အသံကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တိုးမြှင့်ပေးမည်နည်း။ ဖုန်းမှအသံဖမ်းခြင်းသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်သွားသည်။ အသံထုတ်လွှင့်မှုပရိုဂရမ်များတွင်ပြုလုပ်သည်။ ငါ CoolEdit သုံးလိမ့်မယ် အကယ်၍ သင်၏အစီအစဉ်သည်အသံကိုသူ့ဟာသူမဖွင့်နိုင်ပါက ...
စကားလုံးကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ... ဘယ်လိုအဆိုးမြင်ဝါဒ, မိန်းကလေး? အဘယ်ကြောင့်“ ပျက်စီးခြင်း” ခံရသနည်း။ ဒီတစ်ခါလည်းပိုကောင်း - "လက်ထပ်"? ဒါမှမဟုတ်အဲဒါပြီးပြီလား ရုရှားလိုလုံးဝမဟုတ်ပေမယ့်အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းပါတယ်)))))) PPC ဟာမလွှဲမရှောင်သာဖြစ်ပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုပါ။ ဒါဟာလုပ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ် ...
အရိုးရှင်းဆုံးအခမဲ့ဗီဒီယို slicer ကဘာလဲ။ SolveigMM AVI Trimmer + MKV အခမဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင်အယ်ဒီတာသည်အရည်အသွေးဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲလျင်မြန်စွာတည်းဖြတ် AVI ဖိုင်များ။ ဒီအစီအစဉ်မှာရိုးရှင်းပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။
Yu-tuba နှင့်အတူရုပ်ရှင် upload လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
U-TUB မှရုပ်ရှင်ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်။ ORBIT ပရိုဂရမ်ကို Download လုပ်ပါ။ ပြီးတော့ wa ။ သူတို့ကအရာအားလုံးကိုရှင်းပြလိမ့်မယ်၊ youtube မတိုင်မီ ၂ စက္ကန့်ကိုရေးသားပါ။
ဗီဒီယိုကို format နဲ့ MKV အမျိုးအစားကဘာလဲ? ကကစားသမားကြည့်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှသောအရာကိုတွင်? သငျသညျကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဒီ MKV ဗီဒီယိုအမျိုးအစားကဘာလဲ။ ဘယ်ကစားသမားကိုကြည့်လို့ရမလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် MKV သည်ဗွီဒီယို၊ အသံဖိုင်ပါဝင်သည့်ပုံစံတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ဒေတာ။ ကြည့်ပါ…
အဘယ်သူသည်သင်တို့ကို youtube က upload ဗီဒီယိုအဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်သောအရာကို format နဲ့ဘယ်သူသိနိုင်သနည်း
youtube သို့တင်ရန်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုမည်သည့်ပုံစံဖြင့်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သနည်း။ AVI, MP4, FLV - Youtube သည်ဤအရာများအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာလက်ခံသည်။ တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ချက်မှာဗီဒီယိုသည် ...
အိမ်တွင်ဗီဒီယိုတိတ်ခွေကိုဘယ်လို digitize လုပ်ရမလဲ။ သင်ဗွီဒီယိုရိုက်ကူးသည့်ပစ္စည်းကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်၊ သင် USB ကိုသုံးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းသည်စနစ်ယူနစ်အတွင်းသို့ထည့်နိုင်သည်။ VCR ကို video capture device နဲ့ချိတ်ဆက်ပါ။ ဒီဂျစ်တယ်လိုအပ်တဲ့ cassette ကို tape recorder ထဲထည့်ပါ။ အစီအစဉ်ကိုဖွင့်နေသည် ...
ဘယ်ကဗီဒီယိုအယ်ဒီတာဟာ android အပေါ်တစ်ဦးကိုဗီဒီယို deceleration function ကိုရှိသနည်း
android မှာဘယ်ဗီဒီယိုတည်းဖြတ်သူမှာဗီဒီယိုနှေးကွေးနေသလဲ။ android မှာ? ဆဲလ်ဖုန်းအတွက်ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်ရေးဆော့ဗ်ဝဲလား။ Android ကတော့ဆဲလ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်တွေအတွက် operating system တစ်ခုပါ။
ဘယ်လို Youtube ကိုမှဗီဒီယိုတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းဖြတ်ကကယ်ဖို့။
Youtube ဗွီဒီယိုအပိုင်းအစတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးသိမ်းဆည်းနည်း။ ကျွန်တော် QuickTime Player တွင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသည်။ ဤအစီအစဉ်များမရှိပါ။ အရာအားလုံးကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ အပိုင်းအစများကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တောက်ပါ။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ယခုမသိရှိပါ။
အွန်လိုင်း 1 GB ကိုထက်သီးနှံဗီဒီယိုကအရွယ်အစားနဲ့တူပိုပြီး?
အွန်လိုင်းမှာ 1GB ကျော်ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ။ အခမဲ့ပရိုဂရမ်ကို Install လုပ်ပြီးဖြတ်လိုက်ပါ။ အခမဲ့ဗီဒီယိုဒူ http://www.dvdvideosoft.com/ru/products/dvd/Free-Video-Dub.htm အလေးချိန်သည် 20 MB ထက်နည်းသည်။ လျင်မြန်စွာနှင့်ပြproblemsနာများမရှိဘဲ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာကော ..
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,918 စက္ကန့်ကျော် Generate ။